Izikhokelo zeLebhu yamazinyo Ukukhetha ifom echanekileyo yeZirconia-Iindaba-VSmile Co., ltd
Izikhokelo zeLebhu yamazinyo Ukukhetha ifom efanelekileyo yeZirconia
Ixesha: 2020-12-04 I ngxelo:169
Uninzi lwezenzo zamazinyo ziyatshintsha ukusuka kwizithsaba eziqhelekileyo ze-PFM kwaye ziye ekusebenziseni i-zirconia yokudala ukubuyiselwa kwamazinyo okungagungqiyo. Ngenxa yokuba isithsaba se-zirconia kunye neebhlorho zinee-esthetics ezibalaseleyo kwaye azinakonakala, i-zirconia iba yeyona nto ithandwayo ekwenzeni izithsaba zamazinyo nokunye ukubuyiselwa. Zininzi iimveliso ezivenkileni, iNacera, iBruxZir, iSagemax, i-KATANA njlnjl ujongene namawaka aloluhlu oluvela kubenzi abahlukeneyo, iinkampani zorhwebo. kodwa indlela yokwenza ukhetho olufanelekileyo lokuhlangabezana neemfuno zakho?
Masilandele ngeVsmile, sikunika izisombululo.
ZIRCONIA IBHODI IBHODI
I-block zirconia eqinileyo, okanye "i-monolithic zirconia" ayicofeki, kucetyiswa ngokubanzi ngezithsaba zangasemva. i-zirconia eqinileyo inezinto ezizinzisayo ngaphezu kwe-zirconia ephezulu eguqukayo, iyenza yomelele ngakumbi ukumelana nokuhlafuna okunamandla kunye nokuguba. Le nto ilungele ngokukodwa kwizigulana ezinokuthi zitshixe amazinyo. kususwe kuphela okuncinci kolu hlobo lokubuyiselwa, kwaye ukunxiba okuphantsi kumazinyo aphikisayo. I-zirconia eqinileyo ikwasebenza kakhulu ekugubungeni i-preps yamazinyo ebala kakhulu, ngakumbi ezo ziye zamnyama ngenxa yonyango lwangaphambili lwamazinyo, njengeposti kunye nomxholo okanye ukufakelwa kwamazinyo okubuyiselweyo.
Masidibane neemveliso zethu ezimeleyo zirconia eVsmile zirconia famliy esiyibize "I-HT iZirconia Ibhloko"And"ST Zirconia Blockmsgstr ", Esona sisombululo sisiso se izithsaba ezingasemva,ibhulorho egcwele intaba, abutment, inlay kunye nokwenza onlay.
Zirconia UT (I-49% ye-Ultra High Translucent), kwi-700 MPa, yomelele kakhulu kunokubuyiselwa kwe-porcelain-fused-to-metal (PFM) kwaye igcina ukuguquguquka kwendalo kunye nokuqaqamba. Eyona nto ibaluleke kakhulu kolu hlobo lwezixhobo yi-100% yesinyithi. , uphawu olukhusela ubumnyama be-gingival kwaye lususe ukubakho kokuvezwa kwemida yentsimbi ukuba ukuhla kweentsini kuyaqala.
Zizinto zendalo ngokwendalo, zigqithisa umbala wamazinyo akufutshane, kwaye zinokutshatiswa kuwo nawuphi na umthunzi, zisenza i-zirconia ephezulu eguqukayo ilungele iibhlorho ukuya kwiiyunithi ezi-3 ubude.
I-ZIRCONIA IBHODI YANGAPHAMBILI
Ekuqaleni, kuphela kunokulungiswa kwamathambo amhlophe anokuveliswa ngezithsaba zirconia, ezinokuthi ngamanye amaxesha zidale iingxaki ekufezekiseni imbonakalo egqibeleleyo. Ngoku, nangona kunjalo, isizukulwana esitsha sezinto zenziwe kwangaphambili kwaye zinokwenziwa ukuze zibonelele ngobuhle kunye nokubuyiselwa kwendalo okugqibeleleyo ngokuncitshiswa kwamazinyo, ukudibana okanye ukugqitha kwiimfuno zesigulana somsebenzi ophezulu! Okwangoku, ibango le-zirconia lingaphezulu lee kwimfuno ze-PFMs, kwaye ezi ndlela zindala zokubuyiselwa ziba yinto yexesha elidlulileyo.
Emva kweminyaka yokusebenza nzima, sakhula "STCO iZirconia Ibhloko"kwaye "UTCO Zirconia Block"ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo zokwenza amazinyo emboleko.
Sebenzisa i-zirconia yangaphambi komthunzi kungasindisa abaguli bakho ngaphezulu kweeyure ezintathu kuba kungekho mfuneko yokufiphaza ulwelo okanye ixesha lokomisa. Ngenxa yokukhanya kwendalo kwendalo kuyo nayiphi na imeko yokukhanya-nokuba kukukhanya kwelanga, ukukhanya kwelanga okanye ukukhanya okumnyama- ukubuyiselwa kuya kuhlala kubonakala kwendalo. akukho glaze ekhethekileyo ye-fluorescent efunekayo.
I-zirconia ebekiweyo iguquka ngakumbi kunye ne-opalescent, kodwa ngokungafaniyo ne-zirconia eqinileyo, ilungele ngakumbi izithsaba zangaphandle. Nangona isetyenziswa ngokubanzi kwizithsaba zangaphandle, i-zirconia ekhethiweyo inokusetyenziselwa izithsaba zangasemva ukuba kukho ukucoca okwaneleyo. Xa zenziwe ngobuchule, ezona ziphumo zibalaseleyo zobugcisa zinokufikelelwa. Zombini izithsaba ze-zirconia eziqinileyo kunye nezahluli zinamandla kunye nokuhambelana okuthelekiswa nokubuyiselwa kwemveli kwe-PFM, ukanti zibonelela ngobuhle obuphezulu kakhulu.
Nceda ujonge aba bahlobo bane babalaseleyo: "STML""Uhulum""SHTD""3D Plus".
ungaziphatha zonke izikhombisi ngoncedo lwabo ngaphandle kokubaxa.
I-PREV: Merry Chrimas & Happy New Year
OKULANDELAYO : Isikhokelo soKhetho seMill